Casino lac leamy hilton trano fisakafoanana
casino lac leamy fialan-tsasatra ora
casino lac leamy sakafo atoandro buffet
mahagaga casino lake faha-4 jolay ny fankalazana
Casino mpandraharaha Caesars fialam-Boly dia tonga amin'ny fifanarahana ny sisa tavela bondholder fanakatonana ny orinasa interminably nahemotra tolo-fanavaozan-drafitra. Ny talata, Caesars nanambara fa fefy tahirim-bola Trilogy ny Fitantanana ny Renivohitra nanaiky ho fanohanana ny drafitra fanavaozana ny rafitry Kaisara ny bankirompitra tena tarika Caesars fialam-Boly Mpiara-Miasa (CEOC).
Na mafy dia nahita fa mety ny hamoaka ny zavatra ilaina Caesars dangled handresy lahatra Trilogy handrehitra ny teny. Trilogy, izay natao ihany $9.4 m ny CEOC ny $18.4 b-trosa, dia efa niakatra tampoka tao anatin'ny minitra farany fanafihana ny fifanarahana Caesars nahatratra ny hafa junior-trosa, ny fifanarahana izay efa naka efa ho roa taona mba hifampiraharaha. Caesars dia voatery mba hanitatra ny fe-potoana voalaza tamin'ny herinandro lasa teo mba hanohy ny ezaka mba hiezaka mba hitondra Trilogy tao an-tsambo casino lac leamy hilton trano fisakafoanana. Ny Trilogy fifanarahana ankehitriny ravina iray monja kokoa niggling sakana ho CEOC ny fanavaozan-drafitra, izay ho hitanareo ny orinasa raraka an-casino ny fitantanana ny orinasa sy ny fampiasam-bola tena fananana fitokisana, Ny orinasa dia mbola miady amin'ny Pirenena Tahirim-bola fisotroan-dronono ny CEOC mpiasa fisotroan-dronono, fa Caesars bankirompitra mpisolovava milaza ry zareo akaiky ny famahana ity olana ity casino lac leamy gatineau quebec.
Raha CEOC ny lalana miverina any solvency hita napetraka, ny rafitra dia tsy maintsy ankatoavin'ny federaly bankirompitra watchdog casino lac leamy fialan-tsasatra ora. Fa ny ANTSIKA Pananana nanolo-kevitra ny mpampanoa lalàna tamin'ny herinandro lasa teo fa nahazo fankatoavana dia tsy voatery ho ny slam dunk. Ho takalon'ny Caesars nampiakatra ny hamaly manolotra ny zavatra approximating sahaza, zandriny-trosa dia tsy maintsy mba forego ny fanenjehana araka ny lalàna manohitra ny ray aman-dreny orinasa sy hanafaka ny ray aman-dreny ny andraikitra bebe kokoa ho an'ny CEOC ny trosa casino lac leamy sakafo atoandro buffet. Tsy ara-dalàna io absolution fa tsy mipetraka tsara amin'ny feds. Amin'ny famenoana ny Chicago bankirompitra fitsarana, ANTSIKA Pananana mpisolovava Denise Delaurent nilaza fa, avy amin'ny sampan-draharaha ny fomba fijery, "na dia, raha ny olona rehetra ho avy izao ny fifanarahana, dia mety mbola mandika ny lalàna." Hahazo ny farany filokana vaovao avy any Calvin Ayre mahagaga casino lake faha-4 jolay ny fankalazana.
Tattoo fampirantiana fanahy tendrombohitra casino
Haavon ' ny poker chip
Casino akaikin'ny new iberia louisiana
Bongo paradisa slots dar es salaam
Ambonin'ny pro 6 sd slot
Mahagaga casino lake toaka ora
Geant casino bastia home delivery
Afrika golf club poker chip
Casino akaikin'ny fanantenana vaovao pa
Antoko casino bonus code petra-bola
Casino lac leamy ora ny hetsika